IELTS Writing နဲ့ ပတ်သက်လာရင် သတိထားသင့်သောအရာများ – SLD EDUCATION
Academic Writing ဆိုရင် နိုင်ငံတော်တော်များများက Band 6.5နဲ့အထက်ရတဲ့သူတွေ နည်းနေလို့ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုပြီး အဖြေရှာရင်း တွေ့ရှိလာတဲ့ အချက်တွေကို SLDကနေ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ Online မှာ IELTS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလိုလို နည်းအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ဟာတွေကြောင့် English တော်တော်ကောင်းတဲ့သူတွေတောင်မှ အမှတ်နည်းစေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Cambridge က IELTS မေးခွန်းတွေထုတ်သူတွေ၊ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Professorsတွေ၊ Test Writersတွေကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ guidelinesအများကြီးကိုအတိုချုံးပြီး၊ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်မည့် guidelines တွေကို မြန်မာလို ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
. Writing ပုံစံ အသေးစိတ်မဆွေးနွေခင်…IELTS Writing Test က ဘာကိုတိုင်းတာတာလဲ…ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
a. IELTS တိုင်းတာကတော့ ကျောင်းတက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် (Academic)၊ အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ဖြစ် (professional) လိုအပ်တဲ့ writing skills ရှိလားဆိုတာပါပဲ။ နှစ်ခုစလုံးမှာ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျ ကိုယ်ပိုင်စာလုံးတွေစီပြီး အကျဉ်းချုပ်တတ်သလား၊ လေးနက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် (argument and views) တွေကို အချက်ကျကျ တင်ပြတတ်လား ဆိုတာတွေပါပါတယ်။
b. Academic Module မှာ Master Thesis တို့ PhD dissertation တွေရေးတတ်လားဆိုပြီး မစစ်ပါဘူး။ Academic Englishကို စစ်တာပါ။ တွေ့နေကျ General Science based topics လေးတွေကို အချက်ကျကျနဲ့ ရှင်းပြတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ (ဉပမာ- လေထုညစ်ညမ်းမှုပြဿနာက ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းမလဲ။)
c. မေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ဖြေတတ်လား။ တစ်ချို့ကပြောလို့မရဘူး။ ဆင်အကြောင်းမေးတာ အိမ်မှာရှိတဲ့ အန်တီ ၀၀လေးအကြောင်းပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်လေ။ ပြောချင်တာပြောပြီး စာလုံးတွေအများကြီးနဲ့ စာမျက်နှာအများကြီးကို ဖြည့်နိုင်တိုင်း အမှတ်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်သလောက် အချက်တွေကိုပဲထည့်ပြီး ရေးရပါမည်။ စာတစ်ပိုဒ်မှာ ၂ ချက်ကနေ၊ ၃ ချက်ထိပဲလိုပါတယ်။ ဒီထက်ပိုများရင် စာပိုဒ်က ရှုပ်ထွေသွားနိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှ အထွေထွေဗဟုသုတ ဘယ်လောက်ရှိတာကို တိုင်းတာနေတာမဟုတ်ဘူး၊ English skills ကို တိုင်းတာနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
d. Essayတစ်ခုကို Essay structure (ဖွဲ့စည်းပုံကျကျ) ရေးတတ်လားဆိုတာလည်းကြည့်ပါတယ်။ Introduction(နိဒါန်း) paragraph ကို introductory general statement + statement of the problem (topic of the essay or thesis); Body/Detail (စာကိုယ်) paragraphs တွေကို topic sentence, detailed explanations, conclusions; conclusion (နိဂုံး) paragraph ကို paraphrase လုပ်ရေးရပြီး လိုအပ်ရင် personal Opinion, solutions, etc. တွေကိုလည်းရေးပြနိုင်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ကလေးတွေဘာလို့ အားနည်းလဲ?
၁. IELTS က formal writingနဲ့ ဖြေရတယ်ဆိုတာ တချို့ကမသိကြဘူးလို့ပြောရင်ရတယ်။ Formal writing ကိုဆိုရင် language အသုံးအနှုန်း၊ Paragraph အဖွဲ့အစည်းကအစရေးတဲ့နည်းရှိပါတယ်။ (အပေါ်က 1.aနှင့်dကိုလည်းပြန်ဖတ်ပါ)။
၂. General knowledge အားနည်းနေတာလည်းပါပါတယ်။ English စာကောင်းကောင်းရေးနိုင်ပြီဆိုရင်လည်း argument လုပ်ဖို့၊ opinion ရေးဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်မှာလုံလောက်တဲ့ General knowledge ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ စာကို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ဖတ်ထားသူတွေ အတွက်ကတော့ ရေးဖို့ ideas တွေအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ တချို့ ကလေးတွေက idea ကို လုံးဝကို မရှိတာပါ။ What’s your favorite law? ဆိုပြီးမေးရင် ဘာ lawကို ကြိုက်သလဲ၊ ဘာကြောင့်ကြိုက်သလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးဝင်လို့ ကြိုက်သလဲဆိုတာကို မသိကြတာလည်းပါပါတယ်။
၃. နောက်တစ်ခုက Writing ကို ကြောက်နေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေအတွက် writing လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ သက်ပျင်းချကြတယ်။ အမြန်ဆုံးနဲ့ ပြီးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ (သို့) ရေးပြီးသားကျက်လို့ရတဲ့ အပိုဒ်တွေ ရှာကျက်ရေးကြတယ်။ ဖြေးဖြေးနဲ့ပုံမှန်လေး ပျော်ပျော်သင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို မသိကြတာလည်းပါတာပေါ့။
၄. Online မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေလိုလိုနဲ့ သင်ပေးနေတဲ့ ဖြတ်လမ်းနည်းတွေ၊ essay formats တွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး လိုက်တုကြတော့ Band7နဲ့ အထက်ရသင့်တဲ့သူတွေလည်း ဒုက္ခရောက်သွားတတ်ကြတယ်။
Writing နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းပြီး ဘယ်လို အမှတ်ပေးလဲ။
Writing Task 1 ထက် Writing Task 2က ပိုပြီးအချိန်စီးပါတယ်။ Writing Task2အမှတ်ကို ၂နဲ့ မြှောက်ပြီး Writing Task 1 အမှတ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၃နဲ့ စားလိုက်တဲ့ အမှတ်က overall writing အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဉပမာ- task 1မှာ band 7.5 ရတယ်၊ task2မှာ band6ရတယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ်ရမည့် score က 6.5 (7.5 +6+6= 19.5 /3= 6.5) ဖြစ်ပါတယ်။ Task 1 က Band 6, Task2က7ဆိုရင်တော့ band6(6 +7+7= 20 y3= 6.7 (or 7) ရပါတယ်။
Writing အမှတ်ကို ဘယ်လိုပေးလဲ?
Task 1 နဲ Task2ကို အမှတ်တိုင်းတာပေးတဲ့ အချက် ၄ ချက်စီရှိပေမဲ့ နဲနဲစီတော့ကွာပါတယ်…
Task2ကိုတိုင်းတာတဲ့ အချက်များ
1. Task Respond (TR)
2. Coherence and Cohesion (CC)
3. Lexical Resources (LR)
4. Grammatical Range and Accuracy (GRA)
1. Task Response ဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းတာလဲ (Task 1 ဆိုရင် Task Achievement သုံးတယ်)
a. Intro ပိုင်းမှာ, General Introduction, Thesis Statement တွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အကောင်းဆုံးရေးနိုင်ရမည်
b. Body ပိုင်းမှ, Topic Sentence နှင့် supporting details တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ရေးနိုင်ရမည်။ ရေးနည်းက formal စံရမည်. (Formal writing နှင့် Informal writing ဘယ်လိုကွာလည်း လေ့လာပါ)
c. အကုန်ချုံကြည့်ရင်၊ ဘယ်လောက် အောင်မြင်အောင် ရေးနိုင်လဲ (Task Achievement =fully satisfies all the requirements of the task)။ တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် အဓိကကျတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို အားရ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အထိ တင်ပြနိုင်လား ဆိုတာကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
i. မေးခွန်းမှာ မေးတဲ့ အပိုင်းအားလုံးကို လုံလုံလောက်လောက် ရှင်းပြဖြေသွားသလား။ (ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ကျေနပ်အားရစရာကောင်းအောင်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ အချက်တွေပါသလား)
ii. စာလုံးပေါင်း ၂၅၀ အနည်းဆုံးရေးဖြစ်သလား ဆိုတာတွေကို ကြည့်တာပါ။
2. Lexical Resources: vocabularies ပိုင်းကိုတော့ formal ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေနှင့် devices တွေကို သုံးနိုင်တယ်။ (Formal vocabularies vs. Informal vocabularies ကို လေ့လာပါ)
3. Coherence and Cohesion: paragraph တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ flow ရှိသလား (အဆက်အစပ်ရှိသလား၊ အသွားအလာ ပြေပစ်သလားပေါ့)။ စာကြောင်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားထဲမှာလည်း ထိုနည်းတူ flow ကောင်းအောင် Transitional Devices (ဉပမာ- moreover, furthermore, besides, etc.) တွေကို လိုရင်လိုသလို သုံးတတ်လားပေါ့။ paragraph တစ်ခုစီကို တိုတိုနဲ့လိုရင်းနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ရုပ်တိရှိရှိ ရေးနိုင်သလား (you must organize your answer into logical paragraphs to achieveahigh band)
4. Grammatical Range and Accuracy: simple sentences (ရိုးရိုးစာကြောင်း (သို့) စာကြောင်းတို) တွေမှာ လုံးဝ အမှားမရှိတဲ့ အပြင်၊ Sentence တစ်ကြောင်းမှာ စာလုံးပေါင်း 20 ကနေ 30လုံး လောက်ပါတဲ့ စာကြောင်းရှည်တွေ ရေးပြနိုင်ရသလား။ Sentence တွေ ဖွဲ့စည်းနည်း (Sentence variations)တွေကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုး သုံးနိုင်သလား-(Compound, Compound Complex စာကြောင်းပုံစံတွေကို လေ့လာပါ)
Academic Writing Task 1 ကို ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲ
Task 1 ကိုတိုင်းတာတဲ့ အချက် (၄)ချက်ရှိပါတယ်
၁. Task Achievement (TA)
၂. Coherence and Cohesion (CC)
၃. Lexical Resources (LR)
၄. Grammatical Range and Accuracy (GRA)
**နံပါတ် ၂,၃,နှင့်၄က အပေါ်က Task2ရဲ့ 2,3,4 တွေနဲ့အတူတူပါ**
Task Achievement ကိုပဲ အသေးစိတ်ကြည့်ကြရအောင်
Task Achievement ကိုနားလည်ဖို့, question မှာ လုပ်ခိုင်းတဲ့ tasks တွေကို အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်
‘Summarise the information by selecting and reporting the main features ဆိုပြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့ တာ၀န်ကတော့ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ ရွေးနှုတ်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ရေးတတ်သလားဆိုတာကြည့်ချင်လို့ပဲ။ ဒါကတော့ overview (နှင့် conclusion) မှာ သုံးတာပါ။ (ကျွမ်းကျင်သူဆရာ/မနဲ့ summary လုပ်နည်းသင်ပါ)
“Make comparisons where relevant” က Body Paragraphs တွေရေးတဲ့ချိန်အများအားဖြင့်သုံးရတာပါ။ ဉပမာ- Yangon, Mandalay, Pyin Oo Liwn, နှင့် Taunggyiတို့ရဲ့ ရာသီဉတုတွေအကြောင်းရေးတော့မယ်ဆိုရင်… စာတစ်ပိုဒ်မှာ Yangon ရာသီဉတုကတော့ ဒီလိုရှိတယ်… နောက်တစ်ပိုဒ်မှာ Mandalay ရာသီဉတုကဒီလိုရှိတယ်… စသည်ဖြစ် တစ်မြို့အကြောင်းကို စာတစ်ပိုဒ်နဲ့ ရေးနေမည့်အစား… ဒီမြို့တွေမှာ တူနေတဲ့အချက်တွေ၊ လုံးဝမတူညီတဲ့အချက်တွေကို ရွေးထုတ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်တတ်ရပါမည်။ ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ more than (Degree 2), the most/ugliest (Degree 3), not as__as (Degree 1) language, စသည့် compare/contrast လုပ်ရတဲ့ Grammar တွေကို သုံးတတ်ရပါမည်…
‘Write at least 150 words” အနည်းဆုံး စာလုံးအရေအတွက် ၁၅၀ရှိရပါမည်…
Task 1 Essayကို ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကို အပိုင်းလိုက်သွားကြည့်ရအောင်
I. Introduction: နိဒါန်းဆိုတာ ကိုယ်ရေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာပါရပါမည်။ Task 1ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ရေးခိုင်းတဲ့ အကြောင်းအရာက မေးခွန်းမှာ ပါပြီးသားဆိုတော့ တချို့ကလည်း အဲဒီမေးခွန်းကစာကြောင်းတွေကို ဒီအတိုင်း ပြန်ကူးလိုက်တတ်ကြတယ်။ ဒါက မလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါ။ မေးခွန်းကို paraphrase လုပ်မှသာ အဆင်ပြေပါမယ်။ Paraphraseလုပ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ပိုင်စာလုံး၊ ကိုယ်ပိုင် အသုံးအနှုန်းနဲ့ သူများပြောတာကို အဓိပ္ပါယ်မပြောင်းအောင် ပြန်ရေးတာကို ခေါ်ပါတယ်။
II. Overview: ခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင် တွေ့ရတဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တစ်ချက်/အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ရပ်(trend) တစ်ခုကို summary ပုံစံနဲ့ ရေးရတာပါ။ စာကြောင်းရှည်တစ်ကြောင်းနဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲရေးရင်ရပါပြီ။ ၂ချက်ရေးချင်ရင်လည်းရပါတယ်။ အဲထက်တော့မပိုသင့်ပါ။
Overview မပါရင်တော့ ရတဲ့ Band score နည်းပါမယ်။ Band 6နဲ့ အထက်ရချင်ရင်တော့ overview ရေးကိုရေးရပါမယ်။ overview ထဲမှာ main trends တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးပေးနိုင်ရင်တော့ Band7အထက်ရနိုင်ပါတယ်။ Summary နှင့် Overview က Task 1 Writing မှာ တူတယ်လို့ ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး…
*a summary= ‘a short, clear description that gives the main facts, without details’
*an overview =ashort description of something that provides general information/trend about something, without details:
Band7ရချင်ရင်တော့ summaryထဲမှာ main trends တွေကို (အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမပါဘဲ) ဖော်ပြတဲ့ overview ပါရပါမည်။